Warshadaha Kowledge |
Barkinta Barkin La'aanta Seteel
Barkinta Thermoplastic Block Stainless Steel bearing
Kubbada Qaadista Yaryar
Wareegtada Wareegta ah
Kubbada Qaadista Kubadda
Silindrical Roller Bearing
Qaadashada Wareegga Wareegga Keliya
Qaadashada Wareegga Wareegga ah ee Laba-Laba ah
Nooca Kale ee Xambaarsan
Qaadashada Irbada Roller
Kubbada Xidhiidhka Xaglaha
Wadajirka Wadajirka ah
Tilmaamaha Tooska ah ee Qaadista
Mashiinnada Dhaqdhaqaaqa Tooska ah
Dufanka Lithium ku Salaysan
Salka Kaalshiyamka Dufanka Dufanka leh
Dufanka Dufanka leh ee Saldhigga Polyurea
Dufanka saliidda ee Bentonite
SAMEE Alaab tayo sare leh
KA gorgortan qiimaha dabacsan
Shan tillaabo oo lagaga hortagayo sababaha caamka ah ee dhabar jabinta
1. Ka fogee maaraynta aan habboonayn, kor-u-qaadista iyo kaydinta Xajmiga waa in si siman loogu kaydiyaa baakaddoodii asalka ahayd meel nadiif ah, qalalan iyo jawi heerkul ah. Marka biraha si aan loo baahnayn loo maareeyo, tusaale ahaan, haddii duubabkooda si degdeg ah looga saaro, tani waxay u soo bandhigi kartaa...
Sida loo doorto Qalabka Mashiinka CNC ee Saxda ah ee Wax-soo-saarka Dhalashada: Hagaha Ugu Dambeeya
Mashiinnada CNC waa faras shaqo oo xoog badan marka ay timaaddo fulinta noocyo kala duwan oo ah injineernimada iyo hababka wax soo saarka. Laga soo bilaabo dhalooyinka caagga ah ee wax lagu duray ilaa mashiinnada qaybaha hawada - ma jiraan wax mashiinka CNC uusan gaari karin. Qalabka sida mishiinada wax lagu shiido miiska dushiisa ayaa...
Maxaa keenay shuruudan? - Kiis barasho
Wax walba waa fiican yihiin? Taasi waa inaysan naga dhigin 18 bambooyin aan la arki karin oo ay mas'uul ka yihiin kooxda Kormeerka Xaaladda, muujinaya dabeecad isku mid ah, oo leh calaamado isku mid ah… oo runtii ku baaqaya feejignaan buuxda. Isticmaale (macneheedu waa saaxiib, xubin ka tirsan qoyska SDT) ayaa i waydiistay inaan assi...
Waa maxay sababta xadhkaygu si lama filaan ah u samaynayo buuq xad-dhaaf ah?
by admin 21-08-27
Xajisyadu waa qaybo muhiim ah oo ka mid ah mashiin kasta oo wareeg ah. Shaqadooda aasaasiga ah waa inay taageeraan usheeda wareegta iyada oo la dhimayo is jiid jiid si loo fududeeyo dhaqdhaqaaqa siman. Doorka muhiimka ah ee biraha ay ku ciyaaraan mishiinada awgeed, waxa muhiim ah in si joogto ah loo baadho xadhkahaaga wax kasta...
Hantida wareegta oo leh qaybo kayar oo dheeri ah - waa suurtagal!
Intii aan ku jiray 16-sano ee shaqadeyda Ciidanka Cirka ee Royal Nederland, waxaan bartay oo aan la kulmay in lahaanshaha agabka dheeriga ah ee saxda ah ee la heli karo ama aysan saameyn ku yeelan helitaanka nidaamyada farsamada. Diyaaraduhu waxay istaageen saldhigga Volkel Air Base sababtoo ah gabaabsi agabka dayactirka ah, halka kuwa Kleine-Brogel ee Belg...
Raad Socodka RB ee Caadiga ah
by admin 21-08-02
Raadraacyada Socodka ee Caadiga ah ee Roller Bearings (I) waxay muujinayaan raadraaca ordaya giraanta dibadda marka culeyska shucaaca si sax ah loogu dhejiyo rullaluistemadka cylindrical kaas oo culeys ku leh giraanta gudaha wareegeysa. (J) waxay tusinaysaa raad-raac socodka xaaladdu usheeda foorarsiga ama u janjeedha ka dhexeeya gudaha a...
Afarta marxaladood ee dhaawaca qafiska
Marka cidhifyadu ay shaqeynayaan, wax ka badan ama ka yar waxay keeni doonaan dhaawac gaar ah oo xiran sababtoo ah isqabqabsiga, gaar ahaan marka ay ku shaqeynayaan heerkul sare, xitaa qafiska ayaa dhaawacmi doona. Marka loo eego heerka dhaawaca, guud ahaan waxaa loo kala qaybiyaa marxalado kala duwan, sidaas darteed faa'iidooyinka ...
Liiska nooca mashiinada beeraha
Adduunka oo dhan, isticmaalka qaybo waara oo la isku halayn karo ayaa ah qodobka ugu muhiimsan ee lagu hubinayo in mishiinnada beeralayda si habboon loo ilaaliyo, dalaggana la goosto waqtigii loogu talagalay, iyadoon loo eegin cimilada iyo kuwa gaarka ah ee dalagga. Markaa waxaan caadi ahaan isticmaalnaa dhammaan noocyada mashiinnada beeraha, waa kuwee noocyada biraha la isticmaalo? shiidid...
Qalabka mashiinada beeraha
Mashiinnada beeraha sita farsamada waa saldhig muhiim ah oo mashiinada beeraha iyo qalabka qaybaha iyo qaybaha, si ballaaran loo isticmaalo in baabuurta beeraha, cagaf, engine naaftada, motor, rake, mashiinka baling, goostay, Sheller iyo mashiinada kale ee beeraha, ay sax ah, p.. .
Go'aanso in timaha mar kale la isticmaali karo iyo in kale
Si loo qiimeeyo in xadhigga mar kale loo isticmaali karo, waa in la go'aamiyaa ka dib marka la tixgeliyo heerka dhaawaca, waxqabadka mashiinka, muhiimada, xaaladaha shaqada, wareegga kormeerka, iwm. Hubi natiijooyinka, haddii la ogaado in xajinta ay leedahay dhaawac iyo aan caadi ahayn. xaaladaha, sii socoshada...
Burburka Qaababka Load/Xidhiidhka RCA: Raad-raacyada Socodka ee DGBB ee Caadiga ah
by admin 21-05-25
Raadraacyada Caadiga ah ee Orodka ee Deep Groove Ball Bearings (A) waxay muujinayaan raadraaca socodsiinta ee ugu caansan ee abuurma marka giraanta gudaha uu ku wareego culeys shucaac ah oo keliya. (E) ilaa (H) waxay muujinayaan raadad orod oo kala duwan kuwaaso keena nolol gaaban taasoo ay ugu wacan tahay saamaynta xun ee ay ku leeyihiin xadhkaha. (A) giraanta gudaha rotati...
Maamulka canshuuraha ee dalka Shiinaha ayaa maalmo ka hor daabacay ogeysiis, laga yaabee in qiimaha alaabta ceeriin uu mar kale kor u kaco!!
Maamulka Gobolka ee canshuuraha Shiinaha ayaa dhawaan soo saaray ogeysiis ku saabsan joojinta canshuur celinta dhoofinta ee qaar ka mid ah alaabada birta ah. Cabirkani waxa uu sababi karaa in alaabta ceeriin ay mar kale kacaan. Macaamiisha lahaa qorshooyinka wax iibsiga ee dhawaa waxaa laga codsanayaa inay goor hore diyaariyaan. Waxaa laga yaabaa in qiimaha ceeriin ma ...
Pls naga hel whats app number:0086-17685510491.Tks wax badan.